Exit Intent भनेको के हो? रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्न यो कसरी प्रयोग गरिन्छ? | Martech Zone
व्यवसायको रूपमा, तपाईंले उत्कृष्ट वेबसाइट वा ई-वाणिज्य साइट डिजाइन गर्न धेरै समय, प्रयास, र पैसा लगानी गर्नुभएको छ। लगभग हरेक व्यवसाय र मार्केटरले आफ्नो साइटमा नयाँ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न कडा परिश्रम गर्छन्... तिनीहरूले सुन्दर उत्पादन पृष्ठहरू, ल्यान्डिङ पृष्ठहरू, सामग्री, इत्यादि उत्पादन गर्छन्। तपाईंको आगन्तुक आइपुगे किनभने उनीहरूले सोचेका थिए कि तपाईंले जवाफहरू, उत्पादनहरू, वा तपाईंले खोजिरहनुभएको सेवाहरू छन्। को लागी।
धेरै पटक, यद्यपि, त्यो आगन्तुक आइपुग्छ र उनीहरूले गर्न सक्ने सबै पढ्छन्... त्यसपछि तपाईंको पृष्ठ वा साइट छोड्छन्। यो एक रूपमा चिनिन्छ बाहिर निस्कन विश्लेषण मा। आगन्तुकहरू तपाईंको साइटबाट मात्र गायब हुँदैनन्, यद्यपि... तिनीहरू प्रायः तिनीहरू बाहिर निस्किरहेका छन् भन्ने संकेतहरू प्रदान गर्छन्। यस रूपमा चिनिन्छ निकास आशय.
Exit Intent भनेको के हो?
जब तपाईंको पृष्ठमा आगन्तुकले छोड्ने निर्णय गर्दैछ, केहि चीजहरू हुन्छन्:
दिशा - तिनीहरूको माउस कर्सरले पृष्ठलाई ब्राउजरको ठेगाना पट्टी तिर लैजान्छ।
वेग - तिनीहरूको माउस कर्सर ब्राउजरमा ठेगाना पट्टी तिर छिटो हुन सक्छ।
इशारा - तिनीहरूको माउस कर्सर अब पृष्ठ तल सर्दैन र तिनीहरू स्क्रोल गर्न रोक्छन्।
रूपान्तरण अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरूले यो प्रवृति पहिचान गरे र माउस कर्सरलाई अवलोकन गर्ने र आगन्तुक कहिले बाहिर निस्कनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न सक्ने पृष्ठहरूमा सरल कोड लेखे। जब बाहिर निस्कने अभिप्राय व्यवहार पहिचान हुन्छ, तिनीहरूले एक्जिट पप-अप सुरु गर्छन्... आगन्तुकसँग संलग्न हुनको लागि अन्तिम प्रयास।
बाहिर निस्कने उद्देश्य पप-अपहरू एक अविश्वसनीय उपकरण हो र प्रभावकारी साबित भएको छ:
प्रदान गर्नुहोस् छुट कोड आगन्तुकको लागि सत्रमा रहन र खरिद गर्न।
आगामी प्रचार गर्नुहोस् घटना वा प्रस्ताव र यसको लागि आगन्तुक दर्ता गर्नुहोस्।
अनुरोध गर्नुहोस् इ - मेल ठेगाना न्यूजलेटर वा इमेल स्वचालन यात्रा मार्फत संलग्नता ड्राइभ गर्न।
एक्जिट इन्टेन्ट पप-अपहरू कत्तिको प्रभावकारी छन्?
विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, यो उपयोगी रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसनको लागि एक व्यवसायले संलग्नतामा 3% देखि 300% वृद्धिको आशा गर्न सक्छ (CRO) उपकरण। कम्तिमा, तपाईलाई थाहा भएको आगन्तुकसँग संलग्न हुने प्रयास किन नगर्ने? मलाई बेइमान जस्तो लाग्छ! अनुसन्धानमा जसले तलको इन्फोग्राफिकको नेतृत्व गर्‍यो, Visme ले एक्जिट पप-अपका ५ फाइदाहरू फेला पारे:
तिनीहरू तपाईंको साइट छोड्ने आगन्तुकलाई संलग्न गराउन बिल्कुल प्रभावकारी छन्।
तिनीहरू पप-अपहरू भन्दा कम हस्तक्षेपकारी छन् जुन तपाईंको साइटसँग आगन्तुकको अन्तरक्रियाको क्रममा देखा पर्दछ।
तिनीहरूले स्पष्ट र व्याकुलता-रहित कल-टु-एक्शन प्रदान गर्दछ (CTA).
तिनीहरूले तपाईंको मूल्य प्रस्तावलाई सुदृढ गर्न सक्छन् जुन तपाईंले पहिले नै आगन्तुकलाई सूचित गर्नुभएको छ।
तिनीहरू अपेक्षाकृत जोखिम-मुक्त छन्... गुमाउनको लागि केही बाँकी छैन!
इन्फोग्राफिकमा, पप-अपहरूबाट बाहिर निस्कने भिजुअल गाइड: कसरी तपाईंको रूपान्तरण दरलाई रातभर २५% बढाउनुहोस्, Visme एक सफल को शरीर रचना प्रदान गर्दछ इरादा पप-अप निकाल्नुहोस्, यो कस्तो देखिने, व्यवहार, र बाहिर राखिएको हुनुपर्छ। तिनीहरूले निम्न निर्देशन प्रस्ताव:
डिजाइनमा ध्यान दिनुहोस्।
आफ्नो प्रतिलिपि पोलिश गर्नुहोस्।
पृष्ठको सामग्रीसँग यो सान्दर्भिक रूपमा सान्दर्भिक छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
बाहिर निस्कने वा पपअप बन्द गर्ने माध्यम प्रस्ताव गर्नुहोस्।
कष्टप्रद नहुनुहोस्... तपाईंले यसलाई हरेक सत्रमा देखाउन आवश्यक छैन।
तपाईंको मूल्य प्रस्तावलाई समर्थन गर्न प्रशंसापत्र वा समीक्षा थप्नुहोस्।
परिमार्जन र विभिन्न ढाँचा परीक्षण।
हाम्रो एक को लागी Shopify ग्राहकहरु, को लागी एक साइट अनलाइन लुगा किन्नुहोस्, हामीले प्रयोग गरेर बाहिर निस्कने उद्देश्य पप-अप लागू गर्यौं Klaviyo छुट प्रस्तावको साथ प्राप्तकर्ताले प्राप्त गर्नेछन् जब उनीहरूले उनीहरूको मेलिङ सूचीको सदस्यता लिनेछन्। हामीले ग्राहकहरूलाई एउटा सानो स्वागत यात्रामा पनि प्रवेश गर्यौं जसले उनीहरूलाई ब्रान्ड, उत्पादनहरू, साथै सोशल मिडियामा ब्रान्डलाई कसरी फलो गर्ने भनेर परिचय गराउँछ। हामीले साइन अप गर्न आगन्तुकहरूको लगभग 3% पाउँछौं, र ती मध्ये 30% ले खरिद गर्न छुट कोड प्रयोग गरेका छन्... नराम्रो होइन!
यदि तपाइँ बाहिर निस्कने उद्देश्य पप-अपहरूको केही थप उदाहरणहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ एउटा लेख छ जुन तपाइँलाई केहि शैलीहरू, प्रस्तावहरू, र सिर्जनाको बारेमा सल्लाहहरू मार्फत हिंड्छ:
आशय पप-अप उदाहरणहरूबाट बाहिर निस्कनुहोस्
टैग: त्यागब्राउजर प्लेनरूपान्तरण दर अनुकूलनरूपान्तरित दरक्रोछुट प्रस्तावइमेल मार्केटिङईमेल सदस्यताबाहिर निस्कनएक्जिट एक्सचेन्जनिकास आशयइंफोग्राफ़कKlaviyoमाउस इशाराहरूमाउस वेगपप-अप फारमशॉपिफाईvisme
मलाई आश्चर्य छ कि उनीहरूले कम्तिमा 2008 (तिनीहरू 2010) बाट अवस्थित कुनै चीजलाई कसरी पेटेन्ट गरे। यो सेप्टेम्बर 18, 2008 को हो: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html - एक्जिट-इन्टेन्ट पपअपहरूको बारेमा पोष्टबाट: “... तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा नजिक जहाँ तपाईंको आगन्तुकको माउस कर्सर स्क्रिनको शीर्षमा घुमिरहेको छ… त्यसैले तपाईंले उनीहरूले बन्द बटन क्लिक गर्न लागेका छन् भनी अनुमान गरिरहनुभएको छ। यो मेरो अनब्लक गर्न मिल्ने एक्जिट पपअप हो: एक्शन पपअप: तपाईका आगन्तुकहरूले पृष्ठ छोड्दा ध्यान दिँदै अनब्लक गर्न मिल्ने पपअपहरू..."।
थप रूपमा, त्यहाँ अप्रिल 27, 2012 देखि कोडको यो टुक्रा छ जसले 'निकास-उद्देश्य' टेक्नोलोजीलाई कोडको5लाइनहरूमा लागू गर्दछ, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
तिनीहरूको पेटेन्ट फाइल गर्ने मिति अक्टोबर 25, 2012 हो। Google को अनुसार प्राथमिकता मिति अप्रिल 30, 2012 हो (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Quicksprout बाट अर्को सन्दर्भ: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ पोस्ट: “२०१० मा ScreenPopper.com एउटा मिनी-भ्यानको पछाडि १.५ वर्षको लामो सडक यात्रामा देशको वरिपरि सिर्जना गरिएको थियो किनभने मैले आफूलाई चाहिएको कुरा फेला पार्न सकिन। त्यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा थिएन, त्यतिबेला मात्र प्रस्ताव पपअप प्रभुत्व थियो जुन धेरै कठोर र स्थापना गर्न गाह्रो थियो।" यो 'प्याटेन्ट' फाइल हुनुभन्दा २ वर्षअघिको कुरा हो।
बाउन्स एक्सचेन्जको निष्कर्षमा उत्कृष्ट उत्पादन हुन सक्छ तर तिनीहरूले यसलाई आविष्कार गरेनन् र तिनीहरूसँग "प्रविधि" मा कुनै अधिकार छैन। म आश्चर्यचकित छु कि कसरी तिनीहरूको पेटेन्ट वकिलले मैले गुगलसँग5मिनेटमा फेला पार्न सक्ने कुरा फेला पारेनन्। र म कुनै वकिल होइन। मन नपराउनेले मात्र आफ्नो नभएको कुरालाई एकाधिकार बनाउने प्रयास गर्छ। तिनीहरू यसको लागि $3000-$5000 लिन्छन् र अन्य, सस्तो समाधानहरू अवस्थित हुन चाहँदैनन् (अन्य तपाईंलाई किन "पेटेन्ट" चाहिन्छ?)
मैले वास्तविक प्याटेन्ट पढेको छैन तर म भन्छु कि प्याटेन्टको मतलब यो होइन कि तपाईंले केहि आविष्कार गर्नुभयो। तपाईं एक रणनीति र पेटेंट सुधार गर्न सक्नुहुन्छ कि सुधार।
नमस्ते @douglaskarr: disqus - मैले पेटेन्टको दुई पहिलो अनुच्छेद र यसको सार (माथिको लिङ्कमा) पढेको छु र प्याटेन्टको मुख्य दाबी ठ्याक्कै 'निकास-उद्देश्य' प्रविधि हो। उनीहरूले यस उद्देश्यका लागि माउस ट्र्याकिङको आविष्कार गरेको दाबी गर्छन्। मैले ल्याएको लिङ्कहरूले देखाउँछ कि तिनीहरूले यो आविष्कार गरेनन्। त्यो मेरो विचारमा गलत छ। र यसले मलाई रिस उठाउँछ किनभने म आफैं एक्जिट-इन्टेन्ट स्क्रिप्ट बनाउने सोच्दै छु, वा धेरै तयार विकल्पहरू मध्ये एक प्रयोग गर्दैछु (मैले कम्तिमा 1 विकल्पहरू देखेको छु...)। यदि बाउन्स एक्सचेन्जको प्याटेन्ट उनीहरूद्वारा ब्लक गर्न प्रयोग गरिन्छ, सही रूपमा, प्रतिस्पर्धाले यसले अन्य सस्तो विकल्पहरू प्रयोग गर्ने सबै हालका वेबसाइटहरूलाई साँच्चै चोट पुर्याउन सक्छ; र म जस्ता मानिसहरू जो यसलाई प्रयोग गर्न लागेका छन्। अब जब मैले तपाइँको लेख देखेको छु म 15nd विचार गरिरहेको छु। त्यसको लागि म महिनामा हजारौं डलर खर्च गर्ने कुनै सम्भावना छैन। र यदि तिनीहरू प्याटेन्टको योग्य छैनन् भने पनि, यदि मैले यो आफैं गरें वा अरूलाई प्रयोग गरे भने तिनीहरूले मलाई धेरै समस्यामा पार्न सक्छन्।
पछिल्लो समय म जताततै यस्ता पपअपहरू देखिरहेको छु। निकास-उद्देश्य पपअपहरू बिना हामीले धेरै कष्टप्रद पपअपहरूमा फिर्ता जानु पर्छ - पप-अन्डरहरू, समयमै पप-ओभरहरू, प्रविष्टि-पपअपहरू, इत्यादि।
त्यसोभए, यस्तो देखिन्छ कि Retyp, Optin Monster पछिका मानिसहरूले यस पेटेन्टमा बाउन्स एक्सचेन्जमा मुद्दा हालेका छन्। तर म कानूनी सामानहरूमा पर्याप्त जानकार छैन कि यो बसोबास भयो भने, र यदि त्यसो हो भने, नतिजा के भयो ...? यी लिङ्कहरूमा थप जानकारी:
यहाँ के भइरहेको छ जान्न पक्कै राम्रो हुनेछ। धेरै मूर्ख पेटेन्ट जस्तो देखिन्छ र म यो अन्यत्र उपलब्ध हेर्न चाहन्छु।
त्यो धेरै आकर्षक Teyva छ। म सहमत छु... निरास सूट।
जुन 30, 2016 बिहान 5:46 बजे
BounceX बेच्ने उत्पादन वा सेवा (र BounceX/Yieldify एक उत्पादन जस्तै पूर्ण-सेवा हो) सामान्यतया धेरै तत्वहरू छन्। यो प्रायः सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पेटेन्ट गर्न असम्भव छ, त्यसैले तपाइँ सामान्यतया कोर (यस अवस्थामा अल्गो) को रक्षा गर्नुहुन्छ किनभने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। म पक्का छु कि त्यहाँ एउटा छवि सिर्जना गर्न, वेबसाइटमा छवि पप अप गर्नको लागि त्यहाँ प्याटेन्ट छ जुन तिनीहरूको स्वामित्वमा छैन र प्राविधिक रूपमा उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ।
यो ध्यान दिन लायक छ कि Yieldify (त्यस मामलामा प्रतिवादी) ले तेस्रो पक्षबाट प्याटेन्ट खरिद गर्यो र अब BounceX मा मुद्दा हाल्दैछ। यदि तपाइँसँग प्रतियोगीलाई पछ्याउन पैसा छ भने त्यहाँ थोरै जोखिम छ - यदि तपाइँ मुद्दा हार्नुभयो भने तपाइँ उही स्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाइँ अहिले हुनुहुन्छ (पैसा माइनस) जबकि यदि तपाइँ जित्नुभयो भने तपाइँ भर्खरै बजार को एक हिस्सा बनाउनुभयो। आफ्नो लागि शेयर गर्नुहोस्।